ဘ၀နေညိုချိန်အထိ ချမ်းသာခွင့်မပေးသော အာဏာရှင်နှင့် ခရိုနီများ – MoeMaKa Burmese News & Media
ပင်စင်လစာငွေတွေကိုSmart card ဖြင့်ထုတ်ရမည်တဲ့။ ‘’ဓာတ်ဆီထုတ်သည့် Smart card သည် ကျပ် ၅၀၀ ပေးရသော် လည်း သူတို့၏ Smart Card သည် ၃၀၀၀ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စားဦးရေ ၈ သိန်းကျော်နှင့် နိုင်ငံရေးပင်စင်စား ဦးရေ ၄၀၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါဆိုလျှင် ပင်စင်စား ၉ သိန်း နီးပါးအတွက် Smart card လုပ် (စား)သူ (Cronies) များသည် ကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင် ( သိန်းပေါင်း၂၄၀၀၀) အသာလေးရသွားလေသည်။ မြန်မာပြည်မှာငွေရှာရတာ တော်တော်လွယ်သားပဲနော် . . .
၀ါသနာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာခံ ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ပင်စင်စားများအတွက် ကိုယ်ချင်းစာ အသည်းနာရပါ သည်။
ရင်းမြစ်အား ဤနေရာမှ ရယူပါသည်။
← မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပြောင်းနေပြီ တရုတ်ပြည် →
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း- ပြည်ထွက်ခန်း – အပိုင်း (၃)
November 2, 2017 November 5, 2017 Aung Htet
September 16, 2016 September 16, 2016 Aung Htet
10 thoughts on “ဘ၀နေညိုချိန်အထိ ချမ်းသာခွင့်မပေးသော အာဏာရှင်နှင့် ခရိုနီများ”
ပင်စင်လစာထုတ်ဖို့ smart card နဲ့ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ ……. “ကောင်းပါတယ်…မကောင်းတာက ကျပ်(၃၀၀၀)ပေးရမယ်ဆိုတာပဲ”….နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စားတွေအတွက် အဲဒီ smart card ကို ပင်စင်စားတွေဆီက လည်ပင်းမညှစ်ပဲ အခမဲ့လုပ်ပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးကောင်းပါသည်ဖြစ်သွားမှာပေါ့…..။
There’s one Law for the rich,andanother for the poor.
They do not need any card, just direct transfer to pensioner’s bank account. That’s all they need to do. No need to deal with any government service staff to avoid asking tips and bribery. Majority of burmese people are corrupted and wants to suck blood from others. It is suchashame to call buddhist country.
There will beatransaction fee or processing fee for direct transfer to pensioner’s bank account. These needy greedy money makers will try to get the pensioners money one way or another. There is no escape.
lamine ngwe says:
မိုးမခကို ဆက်လက် အားပေးနေပါမည်။
This is so awkward,ridiculous arrangement. Should change immediately.Still these people wants to make money from the retired old,servicemen,from the country ? Shameful.
ဒီလို လူလည်ကျ ခေါင်းပုံဖြတ် ထင်သလိုချယ်လှယ်လာတာ ဒီကနေ့အထိ မပြီး.. မပြီးနိုင်ပါလား အရပ်ကတို့…
နိုင်ငံ တော်မှာ ဒီလိုကိစ္စတွေက အများကြီးရှိနေသေးတယ် ဆိုတာပြည်သူတွေသိအောင် အခုလိုပဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ချပြရင်ပိုကောင်းတာပေါ့.။